David Alaba oo qeyb ka noqday qorshaha dib u dhiska Kooxda Manchester City ee xagaagan xilli Leroy Sané… – Gool FM
Muxuu yahay Ninka aadka ugu muuqaalka eg David de Gea ee uu Twitter-ka ku soo bandhigay Goolhayaha Kooxda Manchester United?
Mushaharka uu qaadanayo, lambarka loo gacan gelinayo & faah faahinta heshiiska uu Jadon Sancho ugu biirayo Kooxda Manchester United
Antonio Conte oo ka jawaabay wararka la xiriirinaya inuu u wareegayo kooxda Juventus
Hazard oo tilmaamay goolkii ugu fiicnaa ee uu ku arkay tartanka Champions League
Macallin Arsene Wenger oo magacaabay labada Kooxood ee midkood ku guuleysan doonta Champions League xilli ciyaareedkan
Arsenal oo Kooxaha Liverpool iyo Manchester City kula soo biirtay tartanka loogu jiro daafac ka dheela dalka Spain
“Lionel Messi waxa uu kubadda cagta ku soo gabagabayn doonaa Kooxda Barcelona” – Josep Maria Bartomeu
Kooxda Arsenal oo qarka u saaray inay dalab heshiis kordhin ah hordhigto Aubameyang… (Imise Mushahar ah ayuu isbuucii ku qaadanayaa?)
Haaruun July 2, 2020
(Manchester) 02 Luuliyo 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa in daafaca Bayern Munich ee David Alaba ay bartilmaameedsanayso si ay qeyb uga dhigto qorshaheeda dib u dhiska xagaagan.
Tababaraha kooxda Man City ee Pep Guardiola ayaa qorsheynaya inuu shaxdiisa dib u qaabeyn ku sameeyo kaddib markii horyaalka Premier League ay ka fara-marooqsatay Liverpool oo ay ku guuleysatay horyaalka xilli ciyaareedkan, iyadoo todobo kulan ay ka harsan tahay.
David Silva ayaa hore u xaqiijiyay inuu kooxda ka tagayo 10 sano kaddib xagaagan, halka Leroy Sane la filayo inuu ku biiro kooxda Bayern marka suuqa kala iibsiga dib loo furo kaddib markii uu iska diiday inuu saxiixo qandaraas cusub oo uu ku sii joogayo garoonka Etihad.
Iyadoo Vincent Kompany uu ka tagay xagaagii hore, isla markaana labadoodaba Sergio Aguero iyo Fernandinho ay haatan ku jiraan sanadkii ugu dambeeyay ee qandaraasyadooda, Man City ayaa la filayaa inay soo gasho suuqa sanadkaan, inkastoo ay jirto saamaynta dhaqaale ee faafaha Coronavirus.
Wargeyska The Guardian ayaa warinaya in Guardiola uu u calaamadeystay Alaba mid ka mid ah bartilmaameedyadiisa ugu sarreeya suuqa, sababtuna waxay tahay in 28-sano jirkaan uu awood u leeyahay inuu ka ciyaaro daafaca bidix ama daafaca dambe, waana labada qaybood ee Man City ay dooneyso inay xoojiso.
Guardiola ayaa Alaba la soo shaqeeyey waqtigii uu maamulayey Bayern Munich, halkaasoo Alaba ka ciyaaray in ka badan 400 oo kulan tan iyo markii uu kulankiisii ugu horreeyey saftay sanadkii 2010-kii.
Si kastaba ha ahaatee, xiiso walba oo ay Man City u qabto Alaba ma saamaynayo u dhaqaaqista dhinaca kale ee Sane, xilli horraan la isku raacay heshiiska xiddiga reer Jarmal.